पुर्वाग्रहमा रम्ने गलत प्रवृत्ति संगठनमा झांगिन खोजेको छ : बिजय गौतम - Samajik Patra
पुर्वाग्रहमा रम्ने गलत प्रवृत्ति संगठनमा झांगिन खोजेको छ : बिजय गौतम
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) निकटको बिधार्थी संगठन अनेरास्वबियूका संयोजकले एक होटेलमा छुट्टै भेला गरेपछि स-संयोजकले पनि संयोजकसँग सल्लाह नगरिकन छुट्टै बिज्ञप्ति निकाले त्यसपछि अनेरास्वबियूको विवाद सामाजिक संजालमै एकले अर्कोलाई खुइलाउन लागि परेको पाइन्छ। यसै सन्दर्भमा सामाजिक पत्रका प्रतिनिधिले पुर्व अखिल क्रान्तिकारीका केन्द्रिय उपाध्यक्ष तथा संयुक्त अनेरास्वबियूका नेता बिजय गौतमसँग गरिएको छोटो कुराकानी :
अनेरास्ववियू भित्र देखिएको अहिलेको सार्वजनिक विवादलाई कसरी बुझ्ने ?
कोभिड -१९ले निम्त्याएको संकटले सारा क्षेत्रहरु अस्तब्यस्त भएका छन् । हामी विद्यार्थीको मुख्य सरोकार क्षेत्र शिक्षा पनि उस्तै संकटबाट गुज्रिएको सर्वविदितै छ । यस्तो संकटमा शिक्षामा बैकल्पिक बाटोहरुको खोजी मार्फत् समाधानको प्रयत्न गर्नुपर्ने गुरुत्वतर दायित्व अनेरास्ववियूसँग थियो र छ । यस्तो विषम अवस्थामा पनि अनेरास्ववियूमा विवाद देखापर्नु पक्कै पनि राम्राे होईन ।हाम्रा मुल मुद्धा र अविभारामा सम्पुर्ण रुपमा केन्द्रित हुनुपर्ने संगिन घडिमा पार्टीको अन्तरसंघर्षको फोटोकपी अभ्यास विद्यार्थी संगठनमा गरिनुले विवादहरु सतहमा देखापरेका हुन् । पार्टीमा अन्तरसंघर्ष चर्कदां विद्यार्थी संगठन र यसका नेताहरुले खबरदारी गर्नुपर्नेमा उल्टो चर्काउने, तन्काउने उत्तोलक बन्ने अबस्था संगठनकै जिम्मेवार तहबाट निर्माण हुनुले नमिठो पटाक्षेप भएको हो । यसका बाबजुद पनि अनेरास्ववियूलाई शैक्षिक मुद्धा र सरोकारबाट बिमुख हुन दिएका छैनौं र दिने छैनौं ।
संयोजकको नेतृत्वमा एक होटेलमा छुट्टै भेला भयो रे स-संयोजकले छुट्टै बिज्ञप्ति निकाल्नु भयो रे के तपाइको संगठनको बिधि र बिधान उहाहरुलाई नलाग्ने हो ?
हो मैले प्रारम्भ मै भनें जब पार्टी अन्तरसंघर्षको हुबहु अभ्यास विद्यार्थी संगठनमा गर्न खोजियो त्यसैको दुष्परिणाममा लाखौं विद्यार्थीको मनोभावना विपरितका विवादका दृष्य सार्वजनिक भएका हुन् । जुन हुनुहुन्न्थ्यो । विद्यार्थी नेताले त एकताको कडि जोड्ने प्रयत्न गर्ने हो । त्यसको बाताबरण बनाउन भुमिका खेल्ने हो । कसले भन्यो भन्ने आधारमा नभई के ठिक भन्ने आधारमा बहसमा उत्रनु पर्ने हो । तर हामीमा प्रवृत्तिगत विचलन देखा पर्यो । संगठनको फष्ट लिडरले एकल भेलाको नेतृत्व गरेपछी स्वभाविक प्रतिक्रियामा एकल बक्तब्य आउने स्थिती बनेको हो । विधि र पद्धतिको कुरा गाँजरको बाँसुरी जस्तो बनाईनुहुन्न । खान मन लागे खाने अनि बजाउन मन लागे बजाउने गर्नुहुन्न । त्यसैले सर्वप्रथम मुल नेतृत्व देखि हामी सबैले ठिक ठाउँबाट समीक्षा गरेर अनेरास्ववियूलाई नयाँ शिराबाट बढाउने संकल्प र प्रयत्न गर्नुपर्छ । अब विवादलाई ढाकछोप गरेर होइन चिरफार गरेर, कमजोरीको आत्मसातीकरण गरेर बढ्नु सहि हुन्छ । रुपान्तरण सहितको एकताले नै सार्थक दिशा पक्रन्छ भन्नेमा संगठनका मुल लिडरसिप सहित हामी सबै एकैठाँउमा आउनुको बिकल्प छैन । सिङ्गो संगठनलाई विचार र विधिको बैज्ञानिक संयोजनमा हिडाँउने चुनौती आजको नेतृत्वलाई छ ।
अनेरास्ववियूका केही केन्द्रीय नेताहरुले स-संयोजकको राजिनामा समेत मागे भन्ने सुनिन्छ अब समस्याको समाधान कसरी गर्दै हुनुहुन्छ ?
हो, समस्याको जरोमा जान तयार नहुने, सतही आग्रह पुर्वाग्रहमा रम्ने यस्तै गलत खालको प्रवृत्तिहरु संगठनमा झांगिदै जान थालेको छ । मुल लिडरसिप देखि सोपानक्रमका सबै नेता, कार्यकर्ताले निर्मम समीक्षा गर्न ढिला नगरौं । जसरी सह संयोजकले विद्यार्थीको मुद्दामा सरोकारित भएर निकालिएको विज्ञप्ति कै कारण केही सिमित साथिहरुले यसो भन्नखोज्नु भएको छ त्यसरी नै हठात् एकल भेला गर्ने संयोजक वा अरु साथीबारे प्रश्न किन नउठाउने ? त्यसैले अब गाँड कोराकोर गरेर बस्ने होईन निर्मम समीक्षा गरेर, सकारात्मक संकल्प सहित अगाडि बढ्नु पर्छ । एकताको थाँती रहेका कामलाई सम्पन्न गर्नुपर्ने छ । संगठन र यसका नेता कार्यकर्तालाई औपचारिक बैठक, छलफलमा जोड्न जरुरी छ । भर्चुअल नै किन नहोस् । अब परिस्थितिको बस्तुसंगत लेखाजोखा सहित संगठनलाई अर्लि महाधिवेशनको दिशामा लैजान जरुरी छ ।
अहिले विद्यार्थीको परिक्षाबारे, अनलाइन कक्षा संचालन बारे र अनलाइको नाममा प्राइभेट स्कुल/कलेजले बिधार्थीबाट सुल्क उठिरहेको भन्ने बारे तपाइको संगठनको धारणा के हो ?
कोभिड १९ को संकटले शिक्षा क्षेत्र थला परेको छ । मुलुकको झण्डै एक तिहाई जनसंख्या विद्यार्थी छ्न् । आज नियमित कक्षा नहुने अवस्था विद्यमान रहेको र निकट भविष्यमा समेत त्यो सम्भावना नदेखिएको परिप्रेक्ष्यमा हामीले भनेका छौं, सिकाई र मुल्यांकनका सम्भव हुने बैकल्पिक विधि अपनाएर शैक्षिकसत्र बढाउनुपर्छ । हाम्रो जस्तो मुलुकमा अनलाइन सिकाई मुख्य प्रवृत्ती बन्न सक्ने स्थिति छैन । यसर्थ शिक्षालय र विद्यार्थी अनुकुल जुन बिकल्प सम्भव हुन्छ, त्यही विधि अवलम्बन गरेर सिकाई र मुल्यांकन दुबै पक्ष अगाडि बढाउनु पर्छ । किनकी सिकाई एवं मुल्यांकन दुबै विद्यार्थीको नियमित अधिकार हो । विद्यार्थीको अभिलेखिकरण अर्थात् भर्ना आधारभुत पक्ष हो । यसबिचमा हामीले शिक्षामन्त्री देखि विश्वविद्यालयका पदाधिकारीसम्म छलफल गरेका छौं । विद्यार्थीको भविष्य अन्धकारमा राख्न्न पाइन्न भनेर बिकल्पका उपाय सहित ध्यानाकर्षण गराएका छौं । शिक्षालय बन्द भएपनी शैक्षिक गतिविधि बन्द हुनुहुदैन भन्ने हाम्रो प्रष्ट दृष्टिकोण रहेको छ ।फेरि अनलाइन कक्षाको नाउँमा कतिपय निजी स्कुलले मनलाग्दी ढङ्गले शुल्क उठाएको र कतिपयले उठाउन नसकेको भन्दै ताला ठोकेर बसेका छन् । यस सन्दर्भमा एकरुप बाताबरण बनाएर सिकाई सहजीकरण गर्न गराउन समेत आग्रह गरेका छौं । मनलाग्दी ढङ्गले शुल्क असुल्ने स्थितीको खारेजी गर्न भनेका छौं । शिक्षा मन्त्रालयले स्थानिय सरकारलाई आवश्यक भुमिका खेल्न आग्रह गरेको छ । यस सन्दर्भमा बस्तुसंगत निष्कर्ष बाहेकका कसैको मनमौजी अनेरास्ववियूलाई स्विकार्य छैन ।
पहिले-पहिले तपाईको संगठनलाई सडकको बाघ संगठनको उपनाम दिइन्थो तर आज तपाइको मूल पार्टीको नेतृत्वमा सरकार संचालन भैरहेको छ बारम्बार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बृद्दि हुदा समेत तपाइको संगठनले एउटा बिज्ञप्ति समेत निकालेको पाइदेन किन होला ?
यसलाई ३ वटा पक्षमा रहेर हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । पहिलो, आजको विद्यार्थी आन्दोलनलाई हिजोकै तरिकाको आन्दोलनमा खोज्न खोजियो भने तपाईंहरुले भेट्नु हुन्न । बदलिएको ब्यबस्था र यसको पदचापको आधारमा बदलिएको भुमिकामा विद्यार्थी आन्दोलनलाई खोज्नु सहि हुन्छ । अहिले सडकमा टायर बाल्नेतिर भन्दा पनि बहस, छलफल र रचनात्मक प्रकारको गतिविधिमा अनेरास्ववियूलाई भेट्नु हुन्छ । दोश्रो, जसरी यसले हिजो देखि नै सत्ताको तावेदारी गरेन । सत्तालाई खबरदारी गर्ने भुमिका बहन गर्यो । त्यसबाट आज पनि हामी च्युत भएका छैनौं । तर अहिले कहिलेकाही हामीहरु पनि यहीँ टकराउने गरेका छौं । तेस्रो, कोभिड १९ को संकटले झनै हाम्रो आन्दोलनका शैलीमा बदल्न बाध्य पारेको छ ।
पहिलो, अनेरास्ववियूका सिङ्गो नेता, कार्यकर्तालाई जिम्मेवार ढंगले अगाडि बढ्न अनुरोध गर्न चाहन्छु । दोस्रो, अहिलेको कोभिड १९ ले सृजित समस्या समाधानको पक्षमा असल सारथि बन्ने दायित्वमा खरो उत्रिन आम युवा विद्यार्थीलाई समेत अनुरोध गर्न चाहन्छु । अन्त्यमा हाम्रो स्वअनुशासनले नै सबै प्रकारको संकटलाई जित्न निर्णायक भुमिका खेल्ने कुरा सबैले हृदयंगम गर्नुहुनेछ भन्ने बिश्वास समेत ब्यक्त गर्न चाहन्छु ।
बिधार्थी नेता विजय गौतमलाई कोरोना पुष्टि
शनिवार, भाद्र २० २०७७०९:४७:४४
बिजय गौतम अनेरास्वबियू
नेपालका वामपन्थीहरु राष्ट्रलाई अस्थीर गर्न खडा भएको जस्तो देखियो : पदम भट्टराई (अन्तर्वार्ता)